၂၀၁၀ ဖေဖော်ဝါရီလ၌ NETFLIX မှာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ထုတ်လွှင့်သောထုတ်လွှင့်မှုအချို့ရှိသည် - ဤတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် - သတင်း
နှစ်သစ်ကူး Netflix ၏ပြပွဲများအတွက်မယုံနိုင်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှိပါသည် လိင်ပညာရေး သောရိုင်းစီး Fyre ပွဲတော် နှင့်ဖော်ပြရန်မဟုတ် ရယ်စရာပေမယ့်စွဲလမ်း ။ သို့သော်ထိုအရာအားလုံးကိုသင်မုန်းတီးသောအခါသင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။ ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ Netflix ကိုဘယ်လိုထုတ်မလဲ။
လာမည့်လတွင် Netflix တွင်ကျဆင်းနေသောအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးစီးရီးများစာရင်းကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
အမြဲတမ်းစုန်းမ၊ ရာသီတစ်ခု - ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်
အမြဲတမ်းစုန်းမသည် ၁၉၈ နှစ်အရွယ်ကာမဲန်အမည်ရှိမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုအခြေခံထားသော Netflix ၏မူလစီးရီးဖြစ်သည်။ သူမသည်လူဖြူတစ်ယောက်အတွက်ပြုတ်ကျနေသောကြောင့်သစ်တိုင်ပေါ်တွင်မီးလောင်ကျွမ်းတော့မည့်စုန်းမတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ သူမကစုန်းမကိုဘယ်သူမှမယုံတဲ့အချိန်မှာသူမဘဝကိုကယ်တင်ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုကမ်းလှမ်းထားပေမယ့်သူမရဲ့စွမ်းအားတွေကိုမသုံးနိုင်ပါဘူး။
အားလုံးအတူတူကျဆင်းသွားဇာတ်လမ်းတွဲ 10 ဖြစ်လိမ့်မည်, ထိုသို့အတော်လေးပျော်စရာ, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နာရီဖြစ်နိုင်သည်တူသောနောက်တွဲယာဉ်ကြည့်ရှုပါဘူး။ ငါဆိုလိုတာက Sabrina သည်ဆယ်ကျော်သက်စုန်းမသည် Netflix ပြင်ဆင်ခြင်းကိုရရှိသည် ဒါကသဘာဝတိုးတက်မှုပဲ။
ရုရှားအရုပ်, စီးရီးတစ် ဦး တည်း Premiere - ဖေဖော်ဝါရီလ 1
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ရုရှားအရုပ်ကသေတဲ့အထိဆက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ် ဦး အကြောင်းပါ။ သူမသည်ပါတီပွဲတစ်ခုတွင်ရှိနေပြီးညတွင်သူမသေဆုံးမည့်အချိန်တစ်ချိန်ချိန်တွင် - ထို့နောက်ပါတီ၏တူညီသောနေရာတွင်ပြန်လာနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်လူသတ်မှုကိုလျှော့ချခြင်း၊ ထူးဆန်းသောမတော်တဆမှုအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးစီးရီးပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ရှစ်ဇာတ်လမ်းတွဲစီးရီးကို ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်၊ Netflix တွင်ပြသမည်။
အောင်ပြီ! မက္ကဆီကို - ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်
ရိုက်ပြီးတူတယ် ဂရိတ်ဗြိတိန်မုန့်ဖုတ် steroids အပေါ်။ ပူပြင်းစွာရှုပ်ထွေးနေသောမုန့်ဖုတ်ခြင်းပြိုင်ပွဲတွင်မုန့်ဖုတ်သမားများသည်ဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ ဆုအတွက်စားသုံးနိုင်သောလက်ရာများကိုပြန်လည်ဖန်တီးပေးကြသည်။ ပြပွဲ၏မက္ကဆီကိုဗားရှင်း 8 ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ ဒီဟာကအမေရိကန်ဗားရှင်းနောက်တွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ကြိမ်တွင်တစ်ရက်၊ ရာသီသုံး - ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်
တတိယအကြိမ်မြောက်အမေရိကန်စီးရီးတစ်ခုဖြစ်သော One Day at Time သည်ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းတွင်ကျဆင်းလာမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူမ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးငယ်များကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးသောကွာရှင်းထားသောမိခင်တစ် ဦး ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်သည်။ ဒီအယူအဆဟာအဲဒီမှာအနည်းငယ်သာရှိနေပြီးအဲဒါကိုကြည့်နေပေမယ့်ကြည့်ရှုစရာဘာမှမရှိရင်ကြည့်ရတာလွယ်ကူပါတယ်။
ပတ်ပတ်လည်ချိန်းတွေ့ - ဖေဖော်ဝါရီလ 14
Valentine's Day မှာချိန်းတွေ့တဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ မင်း Ben & Jerry ရဲ့တစ်ယောက်တည်းအော်ဟစ်ငိုကြွေးနေတဲ့မင်းဘာကြည့်နေ ဦး မှာလဲ။ ယခုနှစ်တွင် Netflix ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမူရင်းစီးရီး - Dating Around ပုံစံဖြစ်သည်။ နှင့်အညီ, ဒါဟာချိန်းတွေ့ပြပွဲဖွင့် !!!
ဤသည် Netflix ၏ပထမ ဦး ဆုံးမူရင်းချိန်းတွေ့ပြပွဲဖြစ်ပါတယ်
အဖြစ်အပျက်တိုင်းတွင်တစ်ခုတည်းသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာအောင်ကြိုးစားပြီးရက်စွဲတစ်ခုသို့သွားသည်။ Netflix ကဒီပြပွဲကို 'flirty banter, အဆင်မပြေဖလှယ်မှုများနှင့်စစ်မှန်သောဆက်သွယ်မှု၏အချိန်လေးရှိခြင်း' 'ဖော်ပြသည်။
အဆိုပါထီးအကယ်ဒမီ - ဖေဖော်ဝါရီလ 15
Umbrella အကယ်ဒမီသည် My Chemical Romance မှ Gerard Way မှဖန်တီးပြီးရေးသားထားသော Eisner ဆုရရုပ်ပြများနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဝတ္ထုများအပေါ်အခြေခံသည်။ ၎င်းသည်ကလေးငယ်များအကြောင်းဖြစ်သည်။ မိခင်များသည်သူတို့ (အိပ်မက်ဆိုးအိပ်မက်ဆိုးများ) တွင်ကိုယ်ဝန်မရကြောင်းလက္ခဏာမပြဘဲသူတို့ကိုမွေးဖွားခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကိုကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ဖို့မြှင့်တင်ပေးတဲ့ဘီလျံနာတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုမွေးစားခဲ့တယ်။
သငျသညျသရုပ်ဆောင်အချို့အဖွဲ့ဝင်များအကျွမ်းတဝင်ကြည့်ရှုထင်လျှင်, ကလေးနှစ်ယောက်နှစ်ခု Juno ကနေ Misfits နှင့် Ellen စာမျက်နှာ, တနည်း Juno, ကနေ Nathan, Robert Sheehan ကကစားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရာသီတစ်ရာသီသည်ဖေဖော်ဝါရီလလယ်တွင်ကျပြီး ၁၀ နာရီ၊ နာရီကြာအဖြစ်အပျက်များပါဝင်သည်။
စားဖိုမှူးရဲ့စားပွဲ, Volume ကိုခြောက် - ဖေဖော်ဝါရီလ 22
Mashable အဆိုအရ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင်စားဖိုမှူး၏စားပွဲအတွဲ ၆ သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်တွင်ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ Netflix ကဤနေ့ရက်ကိုကမ္ဘာအနှံ့ကြေငြာခြင်းမရှိသေးသောကြောင့်ဤပြပွဲသည်အမေရိကန်၌ပြသမည်ဆိုပါကရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ လွှတ်ပေးရန်။
စီးရီးများသည်သူတို့၏ကျော်ကြားသောစားဖိုမှူးများ၊ သူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဇာတ်လမ်းများ၊ လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စတိုင်များကိုမျှဝေသည်။ ဒါကပျင်းစရာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုကြားပါ - ဒီပြပွဲကအနုပညာပဲ။ အသံအနိမ့်အမြင့်အတွက်နောက်တွဲယာဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်။ ဆုံးဖြတ်ပါ
Netflix ရဲ့လိင်ပညာရေးအကြောင်းရာသီ ၂ နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့သိသမျှအရာအားလုံး
• ဤရွေ့ကား Fyre ပွဲတော်ဖျက်ဆီးသော Hilary memes နှင့် tweets ဖြစ်ကြသည်